Mayelana NATHI - Fuzhou Juan Juan Non-Nokwelukiweyo Products Co., Ltd.
UJuan Juan ungumkhiqizi wamanzi namathawula amasha kakhulu emhlabeni. UJuan Juan. iqhubekile nokuvela kusukela kwaqala ngo-2010. Njengamanje ikomkhulu lakhona eFuzhou, eChina, ifa lethu kanye nekusasa lethu kufakwe ezinhlosweni zethu zokuba umhlinzeki oholayo wezisuli ezingasuki ezelukelwe ezungeze imvelo namathawula okotini ezimakethe. Njengomlingani we-OEM wemikhiqizo emikhulu emhlabeni, Sinikeza umugqa ophelele we-Eight othomathikhi wokukhiqiza othomathikhi wesula isikhwama kanye nomugqa wokukhiqiza othomathikhi ogcwele othomathikhi wohlobo lwe-canister lokuhlanza ama-disinfecting kanye nama-alcohol wipes nge-blow blow molding yethu ye-HDPE canister ne-PP lid line production Ukukhiqizwa Kwansuku zonke kungamaphakethe / ama-canisters angama-250,000.
Ifektri yethu ithenjwa ngamahhotela amaningi amakhulu e-china nabathengisi ukuletha njalo imikhiqizo yekilasi lokuqala kufaka phakathi ukusulwa kwabantwana, ukusulwa kwezimonyo, izicubu zangasese ezimanzi nokuhlanzwa kwasendlini, izindwangu, amathawula, njll. Sivela kude eminyakeni eyishumi eyedlule, kepha sisasebenza ngomoya ofanayo wokuhweba nokuzimisela ukuthola indlela engcono yokusula izingane ezingenapulasitiki kumaphakethe wamahhala we-BPA asetshenziswayo futhi asula kalula, njll.
UJuan Juan uyinkampani yezamabhizinisi ethokozisayo, ethokozela ukukhula okukhulu nabantu abangaphezu kuka-200 abanamakhono abasebenza ndawonye epaki lethu lezimboni. Ibhizinisi lethu lakhelwe emisha, futhi nokuqhamuka nemibono emisha yomkhiqizo yikhona okusidonsela phambili ngeValue “Awukwazi ukusula zonke izinkinga zempilo, vele uphuphe kungenzeka”
Ama-wipe we-Excellet okubulala amagciwane avela kukhwalithi ephezulu yendwangu engalukiwe, indwangu yethu engalukiwe ikhiqizwa yimikhiqizo edumile i-A.Celli Group.
Umlando weqembu lika-A. Celli uqala ngasekupheleni kweMpi Yezwe Yesibili, ngo-1945 Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1980, umndeni wakwaCelli uyabona ukuthi kungenzeka ukusebenzisa ubuchwepheshe obuguquke kakhulu, njengobuchwepheshe bephepha, emkhakheni osafufusa futhi othakazelisayo Imboni yama-nonwovens ibilokhu isebenzisa ama-winders kanye ne-slitting rewinders evela embonini yendwangu, eyaziwa kakhulu ukuthi ihamba kancane futhi ayiqinile kakhulu.
Ngenxa yomuzwa kaPiero noMarco Celli, ngokwethulwa kwamawinders aqinile, athembekile futhi anejubane elikhulu, inkampani ihlangana ngempumelelo esheshayo futhi abakhiqizi abakhulu base-Italiya baba amakhasimende ayo. I-Panex, i-Tenotex, i-Fiberweb bangabanye babakhiqizi abasebenzisa ngokunenzuzo ubuchwepheshe obusha be-A.Celli bokukhulisa ukusebenza kahle kwemigqa yabo nokukhiqiza kwabo. A. I-Celli Specialised in emazombezombe, ukusika, roll ukuphatha nokupakisha. Uhla lomkhiqizo lufaka phakathi amasistimu wokubeka imimese othomathikhi, amasistimu wokusika we-core othomathikhi namasistimu wokuphatha shaft, nolayini asebenza ngamakhono amaningi wokuphrinta. I-A. Celli Nonwovens inikeza uhla olubanzi lwe-master roll winders kanye ne-slitter-rewinders enezisombululo zesimo esenziwe ngokwezifiso zokukhiqiza izimpahla ze-spunbond, spunmelt, spunlace kanye ne-airlaid nonwovens ngokugxila ngokukhethekile ezindwangu ezingasindi nokukhiqizwa kwejubane.
II.Wet Wipes Imishini
Eminyakeni engaphezu kwengu-10, sisebenzise izinhlobo ezi-5 zemishini yokusula emanzi, iPrakthiza nguthisha ongcono kakhulu, ngakho-ke sithuthukisa futhi sithuthukise ulayini wokukhiqizwa kokusula okumanzi kanye nabaphakeli bethu bemishini eyinhloko iminyaka engaphezu kwengu-10. Kulezi zinsuku ikhwalithi yamasula ethu emanzi (kufaka phakathi ama-wouch wipes kanye nokusetshenziswa okukodwa okusula okumanzi) yizona ezizinzile futhi ezivunyelwe kakhulu emakethe. Njengamanje sinomugqa wokukhiqiza osishiyagalombili wokusula ngomkhiqizo wansuku zonke wamaphakethe / imiqulu engama-200,000.
Uhlobo lokususa uketshezi lokubulala amagciwane (ukusula utshwala)
Njengomlingani we-oem osebenzayo wemikhiqizo edumile yomhlaba, sinomshini wethu wokubumba umshini wokwenza umshini we-HDPE nomjovo wokubumba umjovo wokwenza i-PP lid, Ukukhiqiza kwethu kwansuku zonke kungamakhulu ayisithupha / amabhodlela ngalesi sikhathi.
Hhayi kuphela ilebula langasese, kodwa futhi ukwakheka okwenziwe ngokwezifiso kwe-canister nakho kuzokwamukelwa ngemikhiqizo yakho.
IV.Umshini wokugcwalisa okuzenzakalelayo ketshezi we-canister wipes.
Ukukhiqiza kwethu kungamathini angama-24000 ihora ngalinye ngokunemba kuka-0.1%.
Ngokusebenzisa umshini wokugcwalisa othomathikhi, ukuhleleka okukhulu kwe-canister ukubulala amagciwane kungenziwa ngesikhathi.
Awukwazi Ukusula Zonke Izinkinga Zempilo, Vele Uphuphe Kungenzeka!